IVF (Invitro Fertilization) - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဖနျပွှနျသန်ဓသေားဆိုတာ ပုံမှနျသဘာဝအတိုငျး သန်ဓသေားကို မိခငျရဲ့ ကိုယျတှငျးမှာ မြိူးအောငျစတော မဟုတျဘဲ…. သားအိမျပွငျပ ဓာတျခှဲခနျးထဲမှာ မြိူးအောငျစပွေီးမှ ….. မိခငျရဲ့ ခန်ဓာကိုယျထဲ ပွောငျးထညျ့ကိုယျဝနျဆောငျစခွေငျးဖွဈပါတယျ..။ IVF ဟာ ယဘြေုယအြားဖွငျ့ ရှူပျထှေးပွီး အကုနျအကလြညျး မြားပါတယျ..။ သုတသေနတှအေရ ကလေးမရတဲ့စုံတှဲတှရေဲ့ ငါးရာခိုငျနှူနျးလောကျကသာ IVF ကို သုံးပွီးကလေးရဖို့ ကွိုးပမျးလရှေိ့ကွတယျ ဆိုပါတယျ…။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ IVF ရှိနခွေငျးဟာ …. သားသမီးရနိုငျဖို့ခကျခဲနတေဲ့ စုံတှတှေအေတှကျတော့ အားကိုးရာတဈခုအမှနျပါပဲ..။
ဘယျလိုအခွအေနတှေမှော IVF ကို သုံးကွသလဲ
သုတျပိုးအရညျအတှကျနညျးတာ သားအိမျ ဒါမှမဟုတျ သားဥပွှနျမှာ ပွသနာတဈခုခုရှိနတော
မမြိူးဥ ဒါမှမဟုတျ သုတျပိုးကို ခုခံအားစနဈကမှားယှငျးတိုကျခိုကျတဲ့ရောဂါရှိသူတှေ
စတဲ့ အခွအေနတှေမှော သုံးကွပါတယျ…။
ပထမဆုံးအနနေဲ့ အမြိုးသမီးကို သားဥကွှစေဖေို့ သားဥကွှဆေေးပေးပါလိမျ့မယျ။ ဆရာဝနျက သားဥတှကေောငျးကောငျး ရငျ့မှညျ့နခြေိနျ ဟုတျမဟုတျသိရဖို့ သှေးစဈတာ ဒါမှမဟုတျ အာလျထရာဆောငျး ရိုကျတာ တှကေိုလုပျပါလိမျ့မယျ။
မမြိုးဥထုတျမယျ့နေ့ မတိုငျခငျ နဲ့ မမြိုးဥထုတျမယျ့နမှေ့ာ လိုကျနာဖို့ အထူးညှနျကွားခကျြတှပေေးပါလိမျ့မယျ။ မမြိုးဥထုတျခြိနျမှာ ဆရာဝနျက အာလျထရာဆောငျးကိုအသုံးပွုပွီး အခေါငျးပါတဲ့ အပျနဲ့ မြိုးဥ တှကေိုထုတျယူပါလိမျ့မယျ။ မမြိုးဥထုတျခွငျးဟာ ၃၀မိနဈ မှာ ၁နာရီ အတှငျးကွာနိုငျပါတယျ။
မမြိုးဥတှကေို ထုတျယူပွီးတာနဲ့ သငျ့အမြိုးသားအဖျေါ ရဲ့ သုတျပိုးနဲ့ ဓါတျခှဲခနျးထဲမှာ ရောပါလိမျ့မယျ။ သငျ နဲ့ သငျ့အမြိုးသားအဖျေါ အိမျပွနျသှားတဲ့အခါ သန်ဓအေောငျထားတဲ့ မြိုးဥ ကောငျးကောငျးဖှံဖွိုးမှု ရှိမရှိ ဆရာဝနျ ဒါမှမဟုတျ ကြှမျးကငျြသူက စောငျ့ကွညျ့ပေးပါလိမျ့မယျ။ ဆေးရုံ ဆေးခနျး အပျေါမူတညျပွီး ထညျ့သှငျးဖို့ အဆငျသငျ့ဖွဈတဲ့ သန်ဓေ သားလောငျးရဖို့ ၅ရကျလောကျထိကွာနိုငျပါတယျ။
သန်ဓေ သားလောငျးအဆငျသငျ့ဖွဈတဲ့ အခါ သငျ့အနနေဲ့ ဆေးခနျးကိုပွနျလာပွီး ထညျ့သှငျးပေးဖို့ လုပျရပါမယျ။ ဆရာဝနျက Catheter လို့ချေါတဲ့ ပိုကျပြော့နဲ့ သငျ့ မိနျးမကိုယျ သားအိမျခေါငျးကနေ သားအိမျထဲထိ သန်ဓေ သားလောငျးကို ထညျ့သှငျးပေးပါလိမျ့မယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ ကိုယျဝနျရနိုငျခွေ မွငျ့တကျဖို့အတှကျ တဈကွိမျတညျးမှာ သန်ဓသေားလောငျး ၃ ခုထိ ထညျ့သှငျးပေးလရှေိ့ပါတယျ။ ဆေးရုံကနေ ၆နာရီလောကျ အကွာမှာ ဆေးရုံဆငျးလို့ရမှာဖွဈပွီး သငျ့အနနေဲ့ အိပျယာထဲမှာ နားနားနနေေ နဖေို့တော့လိုပါတယျ။ ထညျ့သှငျးပွီး နှဈပတျအကွာမှာ ဆီးစဈတံနဲ့ ကိုယျဝနျရှိမရှိ ဆီးစဈကွညျ့ရပါတယျ..။
အောငျမွငျနိုငျတဲ့ ရာခိုငျနှုနျး ဘယျလောကျလဲ
သငျ့ အသကျအရှယျ၊ သငျနဲ့ အမြိုးသားအဖျေါရဲ့ မူလက သန်ဓမေအောငျနိုငျတဲ့အကွောငျးအရငျး စတဲ့အခကျြတှပေျေါမူတညျပွီး အောငျမွငျ့မှု ရာခိုငျနှုနျးကှဲပွားနိုငျပမေယျ့ ယဘေုယအြားဖွငျ့ ၃၀% လောကျ အောငျမွငျ့လရှေိ့တယျ ဆိုပါတယျ။
အမရေိက မှာဆိုရငျ ဒျေါလာ ၁၂၄၀၀ ဝနျးကငျြလောကျ ကုနျကတြယျဆိုပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ အစိုးရဆေးရုံ တခြို့နဲ့ ပုဂ်ဂလိကဆေးရုံ ဆေးခနျး တခြို့မှာ IVF ကို ဆောငျရှကျပေးနတောရှိပွီး အောငျမွငျမှုလညျးရရှိနပေါတယျ။
ဖန်ပြွန်သန္ဓေသားဆိုတာ ပုံမှန်သဘာဝအတိုင်း သန္ဓေသားကို မိခင်ရဲ့ ကိုယ်တွင်းမှာ မျိူးအောင်စေတာ မဟုတ်ဘဲ…. သားအိမ်ပြင်ပ ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ မျိူးအောင်စေပြီးမှ ….. မိခင်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ပြောင်းထည့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်..။ IVF ဟာ ယျေဘုယျအားဖြင့် ရှူပ်ထွေးပြီး အကုန်အကျလည်း များပါတယ်..။ သုတေသနတွေအရ ကလေးမရတဲ့စုံတွဲတွေရဲ့ ငါးရာခိုင်နှူန်းလောက်ကသာ IVF ကို သုံးပြီးကလေးရဖို့ ကြိုးပမ်းလေ့ရှိကြတယ် ဆိုပါတယ်…။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် IVF ရှိနေခြင်းဟာ …. သားသမီးရနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့ စုံတွေတွေအတွက်တော့ အားကိုးရာတစ်ခုအမှန်ပါပဲ..။
ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာ IVF ကို သုံးကြသလဲ
သုတ်ပိုးအရည်အတွက်နည်းတာ သားအိမ် ဒါမှမဟုတ် သားဥပြွန်မှာ ပြသနာတစ်ခုခုရှိနေတာ
မမျိူးဥ ဒါမှမဟုတ် သုတ်ပိုးကို ခုခံအားစနစ်ကမှားယွင်းတိုက်ခိုက်တဲ့ရောဂါရှိသူတွေ
စတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ သုံးကြပါတယ်…။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ အမျိုးသမီးကို သားဥကြွေစေဖို့ သားဥကြွေဆေးပေးပါလိမ့်မယ်။ ဆရာဝန်က သားဥတွေကောင်းကောင်း ရင့်မှည့်နေချိန် ဟုတ်မဟုတ်သိရဖို့ သွေးစစ်တာ ဒါမှမဟုတ် အာလ်ထရာဆောင်း ရိုက်တာ တွေကိုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
မမျိုးဥထုတ်မယ့်နေ့ မတိုင်ခင် နဲ့ မမျိုးဥထုတ်မယ့်နေ့မှာ လိုက်နာဖို့ အထူးညွှန်ကြားချက်တွေပေးပါလိမ့်မယ်။ မမျိုးဥထုတ်ချိန်မှာ ဆရာဝန်က အာလ်ထရာဆောင်းကိုအသုံးပြုပြီး အခေါင်းပါတဲ့ အပ်နဲ့ မျိုးဥ တွေကိုထုတ်ယူပါလိမ့်မယ်။ မမျိုးဥထုတ်ခြင်းဟာ ၃၀မိနစ် မှာ ၁နာရီ အတွင်းကြာနိုင်ပါတယ်။
မမျိုးဥတွေကို ထုတ်ယူပြီးတာနဲ့ သင့်အမျိုးသားအဖေါ် ရဲ့ သုတ်ပိုးနဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းထဲမှာ ရောပါလိမ့်မယ်။ သင် နဲ့ သင့်အမျိုးသားအဖေါ် အိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါ သန္ဓေအောင်ထားတဲ့ မျိုးဥ ကောင်းကောင်းဖွံဖြိုးမှု ရှိမရှိ ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူက စောင့်ကြည့်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဆေးရုံ ဆေးခန်း အပေါ်မူတည်ပြီး ထည့်သွင်းဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့ သန္ဓေ သားလောင်းရဖို့ ၅ရက်လောက်ထိကြာနိုင်ပါတယ်။
သန္ဓေ သားလောင်းအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့ အခါ သင့်အနေနဲ့ ဆေးခန်းကိုပြန်လာပြီး ထည့်သွင်းပေးဖို့ လုပ်ရပါမယ်။ ဆရာဝန်က Catheter လို့ခေါ်တဲ့ ပိုက်ပျော့နဲ့ သင့် မိန်းမကိုယ် သားအိမ်ခေါင်းကနေ သားအိမ်ထဲထိ သန္ဓေ သားလောင်းကို ထည့်သွင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ များသောအားဖြင့် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေ မြင့်တက်ဖို့အတွက် တစ်ကြိမ်တည်းမှာ သန္ဓေသားလောင်း ၃ ခုထိ ထည့်သွင်းပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဆေးရုံကနေ ၆နာရီလောက် အကြာမှာ ဆေးရုံဆင်းလို့ရမှာဖြစ်ပြီး သင့်အနေနဲ့ အိပ်ယာထဲမှာ နားနားနေနေ နေဖို့တော့လိုပါတယ်။ ထည့်သွင်းပြီး နှစ်ပတ်အကြာမှာ ဆီးစစ်တံနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိ ဆီးစစ်ကြည့်ရပါတယ်..။
အောင်မြင်နိုင်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်း ဘယ်လောက်လဲ
သင့် အသက်အရွယ်၊ သင်နဲ့ အမျိုးသားအဖေါ်ရဲ့ မူလက သန္ဓေမအောင်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရင်း စတဲ့အချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး အောင်မြင့်မှု ရာခိုင်နှုန်းကွဲပြားနိုင်ပေမယ့် ယေဘုယျအားဖြင့် ၃၀% လောက် အောင်မြင့်လေ့ရှိတယ် ဆိုပါတယ်။
အမေရိက မှာဆိုရင် ဒေါ်လာ ၁၂၄၀၀ ဝန်းကျင်လောက် ကုန်ကျတယ်ဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရဆေးရုံ တချို့နဲ့ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ ဆေးခန်း တချို့မှာ IVF ကို ဆောင်ရွက်ပေးနေတာရှိပြီး အောင်မြင်မှုလည်းရရှိနေပါတယ်။
Condom ကို ဘယျလို စနဈတကသြုံးမလဲ